Ukusesha okumangalisayo kwe-WordPress & isihlungi se-plugin - WPSOLR
I-Addons (ama-plugins, amatimu, izici)
kodwa ZONDA ukusesha kwakho?
Ngakho-ke sanikela ngempilo yethu ekuphokopheleni imingcele yokusesha isayensi ukwenza ubuciko obuhle kunabo bonke obaziwa ngumuntu: i-WPSOLR
umsele wordpress search
Yenza usesho lwakho lube Super ngokushesha futhi luhlakaniphe kakhulu
Izilimi ezingama-50 + ezilungiselelwe kusengaphambili
Ukusebenza okungenakuqhathaniswa ne-Elasticsearch, Solr, noma i-Algolia
I-WooCommerce, i-bbPress, i-WPML, i-Polylang, i-ACF PRO, i-Toolset, i-Yoast nokuningi
Sheshisa i-plugin yakho ye-grids oyithandayo: Elementor, Ukubukwa kweThuluzi
I-AI yemibhalo nezithombe
20+ amademo zonke izindikimba ezinkulu
Amabhizinisi amancane & amazwe amaningi
Faka amakhulukhulu ezici kusesho lwakho
Linda, bewazi yini ukuthi ubuchwepheshe obusezingeni lomhlaba obuningi busika ekusesheni?
- Islastiki (I-Wikipedia, Uber, Udemy)
- I-Apache Solr (INetflix, Slack, Coursera)
- Algolia (I-Twitch, Medium, Brilliant)
Nge-plugin yethu, ungazisebenzisa zonke. Akunasidingo sokuba ngumdondoshiya ukuze uphinde usesho olusezingeni lomhlaba.
I-plugin yokusesha ye-WooCommerce
I-plugin ye-WordPress yokusesha
I-plugin yokusesha ye-Algolia
I-plugin yokusesha ye-Elasticsearch
I-plugin yokusesha ye-Elementor
Isitifiketi se-WPSOLR "WPML-Ready"
I-plugin yokusesha ye-Polylang
bbPress search plugin
I-plugin yokusesha ye-Yoast
I-plugin ye-All In One SEO yokusesha
I-plugin yokusesha ye-ACF
I-plugin ye-Google Vision yokusesha
I-plugin ye-Google Natural Language search
I-plugin ye-Amazon Rekognition search
I-plugin ye-Amazon Comprehend yokusesha
I-plugin yokusesha yamathuluzi
Ukusesha kwe-AI - Kuyeza maduze
I-AI / Neural / Ukufunda Okujulile / Ukucinga Kwama-Semantic
Umbuzo nezimpendulo: Ukugeleza Kwengxoxo Ye-Google
I-AI Yokuxoxa: RASA
AmaTransformers nokushumeka kwevektha: ISITOLO, GPT-3, umbhalo osheshayo
Ukufunda okujulile, aka Artificial Intelligence, aka Neural Networks, kukuyo yonke indawo manje: kusuka ekuhumusheni okuzenzakalelayo, kuya ekukhiqizeni umbhalo nge-GPT-3.
Kepha ukusesha kuyathinteka nakulo mkhuba. Isizukulwane esisha semitapo yolwazi noma izinsizakalo ezibizwa nge- "Vector search" ziyavela. Kepha isixhumanisi esilahlekile asikho ukubenza bamukelwe kabanzi: ubulula nezindleko eziphansi.
I-WPSOLR ihlose ukuba yilesi sixhumanisi esilahlekile, ngokuletha lezo zici ezingavamile ku-WordPress naku-WooCommerce, njengoba yenzile ku-Elasticsearch, Solr nase-Algolia.
Olunye usesho lwe-neural, ukufana kwe-neural, izinsiza ezivulekile noma ezilawulwayo, i-WPSOLR ephenya njengamanje:
Ukusekwa kabusha kwe-OpenAI (i-beta isilungile)
Injini Yokufanisa iVertex
Ezinye zezici esingathanda ukuziletha ku-WordPress:
Amamodeli wakamuva: Sebenzisa zonke izinhlobo ezisuselwa ku-transformer zakamuva (isb., BERT, RoBERTa, MiniLM) ukuthola ikhwalithi yokukhipha, ukuqinisekisa ikhwalithi yokukhiqiza, nokubuyisa imibhalo.
Modular: ukukhetha okuningi ukulingana isitaki sakho sobuchwepheshe kanye necala lokusebenzisa. Khetha i-database yakho oyithandayo, isiguquli sefayela, noma uhlaka lokumodela.
Vula: 100% iyahambisana nehabhu yemodeli yeHuggingFace. Vala izixhumi nezinye izinhlaka (isb. Abaguquli, i-FARM, isiguquli semisho)
I-Scalable: Isikali ezigidini zemibhalo ngokubuyisa, ukukhiqizwa okulungele emuva kokukhiqizwa okufana ne-Elasticsearch / FAISS, iGoogle ilatests ama-algorithms we-ANN, kanye nemininingwane yolwazi ephezulu ye-Vector.
Ukuphela kokuphela: wonke amathuluzi endaweni eyodwa: ukuguqulwa kwefayela, ukuhlanzwa, ukuhlukaniswa, ukuqeqeshwa, ukuhlolwa, ukuthathwa, ukufakwa ilebula, njll.
Inobungani bonjiniyela: kulula ukulungisa iphutha, ukunweba nokuguqula.
Yenza ngezifiso: lungisa izifanekiso kusizinda sakho noma usebenzise i-DocumentStore yakho yangokwezifiso.
Ukufunda okuqhubekayo: Qoqa idatha entsha yokuqeqesha kusuka kumpendulo yomsebenzisi ekukhiqizeni futhi uthuthukise amamodeli wakho
Thola izindaba zakamuva ngokuza maduze kosesho lwe-AI lwe-WPSOLR
Sicela ulungise izinkambu ezimakiwe ezingezansi.
1, iqiniso, 6, i-imeyili eholayo, 2
I-1, eyiqiniso, i-1, iGama lokuQala, i-2
I-1, eyiqiniso, i-1, Igama lokugcina, i-2
1, kuyiqiniso, 9, Iwebhusayithi yakho, 2
* Izinkambu ezidingekayo
Qaphela: Kungumsebenzi wethu ukuvikela ubumfihlo bakho futhi siqinisekisa ukuthi idatha yakho izoba yimfihlo ngokuphelele.
Yiba njalo ngaso sonke isikhathi
Ukucubungula Izilimi Zemvelo
Ama-Dynamic Synonyms avela ku-AI
I-Dynamic Reranking evela ku-AI
Hlunga amawijethi (isilayida, i-select2, isikhi sombala…)
Sesha ideshibhodi yezibalo
Futhi ngoba ukusesha kudinga idatha yangempela, sesivele siyenzile izixhumanisi kuma-plugins asetshenziswe kakhulu.
Sebenza ngokukhululekile nge WooCommerce, bbPress, I-ACF Pro, Ukubukwa Kwamathuluzi, I-WPML, Polylang, Yoast SEO, futhi abaningi abengeziwe.
Singakwakhela eyodwa uma kunesidingo.
Diliva ukunemba okungcono kweWooCommerce namanye ama-plugins
Ividiyo yeziphakamiso ze-Algolia typo
Ungazama futhi idemo ebukhoma nge-typo-tolerance and facets >>
Yini i-Dev studio WPSOLR?
Studio I-WPSOLR yiqembu elingemuva kweWPSOLR, i-flagship search plugin yethu yeWordPress & WooCommerce.
IStudio icacisa iminyaka yesipiliyoni ekuthuthukeni nasekuhlelweni kwe:
Thenga kusuka kubachwepheshe be-WordPress ne-Search
Wenza ini i-Studio studio I-WPSOLR ?
I-plugin yethu yokucinga yeWPSOLR kungenzeka ukuthi iguquguqukayo futhi ibukeke emakethe kakhulu. Ilingana ne-99% yezidingo zamakhasimende ethu.
Kepha kwesinye isikhathi, umuntu udinga isandla esengeziwe ukuze afinyelele isipiliyoni esiphelele.
Yakha kabusha isiza sakho sonke ukufinyelela kangcono SEO futhi ukuguqulwa
Sebenzisa i-Elementor Pro, i-ACF Pro, kanye ne-PHP / JS / CSS ukwakha noma iyiphi i-plugin yangokwezifiso (CRM, indawo yangasese yeklayenti, ubulungu,…)
Yakha i-UI entsha yosesho nezihlungi
Bhala uphinde uxhume Umbuzo wangokwezifiso
Ukuhambelana kwesimo ngesimo ngokwezifiso
Xhumana nathi ngawo wonke umsebenzi wakho wesiko
Sebenzisa Icala - Yenza usesho lwe-MyListing lundize ngohlu oluyisigidi esingu-1
Elinye iklayenti le-MyListing leza kithi ngoba indawo yakhe ayikwazanga ukubhekana nohlu lwezigidi zakhe.
Hhayi ukuthi ukusesha bekuhamba kancane, kepha nekhasi lasekhaya nama-Yoast satemaps.
Sishintshe isengezo sethu se-MyListing, futhi manje isayithi lamakhasimende liyandiza, ngisho nohlu olusisigidi.
Sheshisa i-MyListing nezinye izingqikithi
Sebenzisa Icala - Thuthukisa ukunemba kwemiphumela yosesho lwe-MyListing
Iklayenti le-MyListing lifike eStudio yethu ngoba alitholanga uhlu olunembe ngokwanele: ezinye izinkambu zenkambiso lapho zingaseshwanga nhlobo.
Bekumele sakhe isengezo esigcwele, ngoba i-MyListing ayisebenzisi ukusesha okujwayelekile kokugcina umlando.
Manje, ngesengezo esisha, izivakashi zethu zamakhasimende zingasesha kulo lonke ulwazi oluhlobene nokufakwa ohlwini.
Diliva ukunemba okungcono kwe-MyListing nezinye izingqikithi
Sebenzisa Icala - Khipha imibhalo yezithombe ezingama-4,000 kusuka kusayithi lokudla laseFrance
Ikhasimende lithathe izithombe ezingama-4,000 zemikhiqizo yesitolo seGrocery.
Imikhiqizo ingenisiwe (ivumelanisiwe) kusuka kufayela le- UKezia II isoftware yokubhalisa imali, ungene esitolo seWooCommerce “I-Magasin Bio à La Teste de Buch".
Izithombe bese zilayishwa emtatsheni wezindaba.
Umuntu angafanisa kanjani izithombe nezihloko zomkhiqizo, ukuze ulayishe isithombe esifanele kugalari yezithombe zomkhiqizo?
By kukhishwa imibhalo yesithombe (i-OCR), usebenzisa isengezo se-WPSOLR se- I-Google Vision API.
Bese kuthi by ukukhomba ama-mages ku-Elasticsearch ngemibhalo yabo ye-OCR.
Ngemuva kwalokho, ukuvula ilabhulali yemidiya bese ufuna i- “Wine Bordeaux 2019” kubuyisa izithombe ezidinga ukunamathiselwa kumkhiqizo ohlobene.
Sesha izithombe nge-Artificial Intelligence
Sebenzisa Icala - usezingeni ngokwezifiso
Iklayenti liza kithina ngoba libona ukuthi usesho lwalo luvame ukubekwa ezikhundleni zakudala ezikhundleni zokuqala. Okuyinto engeyinhle kangako ngephephandaba.
Ngakolunye uhlangothi, ukuhlunga ngezinsuku kwakukhombisa okuthunyelwe okungasebenzi ezikhundleni zokuqala.
Ngakho-ke, sakha isengezo esisha ngokusekelwe kusici sokubola se-Elasticsearch. Lesi sici sinika amandla ukukala imiphumela ngokusho ukunemba kanye nezinsuku zazo. Okungcono kakhulu, ukunemba kwenani / idethi kungafakwa kahle kumlawuli we-WPSOLR.
Shintsha imiphumela yosesho ngezidingo zakho
© 2020 wpsolr.com. Wonke Amalungelo Agodliwe.